सार्वजनिक यातायातमा प्रहरी के भन्दै छ ? | CNNepal
सार्वजनिक यातायातमा प्रहरी के भन्दै छ ?
करिव ८ ः४० वजेको समयमा रत्नपार्क कंलकी थानकोट चल्ने सार्वजनिक यातायातमा एउटा यस्तो दृष्य देखियो । महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्वुका प्रहरी निरीक्षक शंकर खड्का सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई भन्दै थिए नमस्कार म प्रहरी निरीक्षक शंकर खड्का बलम्वु प्रहरी प्रभागको प्रहरी प्रमुख , तपाईहरुले यो सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा कुनै अपरिचित व्यक्तिहरुले महिला दिदी वहिनीहरुको संम्वेदनशिल अंग छोएमा, खुट्टाले कुल्चेमा, हातले धकेलेमा, तोकेको भन्दा वढि भाडामा लिएमा, पाकेट मारेमा,तपाईहरुको साथमा भएको अमुल्य बस्तु हराएमा, तपाईहरुलाई अपाच्य हुने कुनै पनि किसिमको अपशव्द बोलेमा, सवारीका चालक तथा सहचालकले अपशव्द बोलेमा, अनावश्यक रुपमा जिस्काउने,अपहेलना गरेमा , तपाईहरुको आरक्षण सिटमा बस्न नपाएमा,शंकास्पद कुनै व्यक्ति चढेमा ओर्लेमा तुरुन्त प्रहरीलाई १०० मा अथवा गाडीमा टास गरेको स्टिकरमा भएको प्रहरी कार्यालयको नम्वरमा तुरुन्त कल गर्न आग्रह गर्दे थिए । यो थियो महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्वुको समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत महिला हिसां, पाकेटमार,सार्वजनिक यातायातमा हुने दुरब्यहार, सम्वन्धी एक हप्ते जनचेतना मुलक अभियान ।
प्रहरीले समुदाय प्रहरी अन्तर्गत टोलटोमा प्रहरी, स्कूल स्कूलमा प्रहरीलाई निरन्तरता दिई रहेको छ । यो अभियान जनस्तर सम्म प्रभावकारी वन्दै गईरहेको पनि छ । बढ्दो शार्वजनिक यातायातमा हुने महिला हिंसाको घटनामा बृद्धि हुन थालेपछि बलम्वु प्रहरीले भने बस बसमा नेपाल प्रहरी अभियान सुरु गरेको हो । नागंढुगा,थानकोट,कंलकी रुटमा चल्ने शार्वजनिक बसहरुलाई रोकेर स्टिकर सहित यात्रुहरुलाइ दुई मिनेट सचेतना मुलक सन्देश दिन थालेको छ । विहान दैनिक दुई घण्टा बलम्वु प्रहरीले सचेतना मुलक सन्देश दिन थालेपछि यात्रुहरुमा सकारात्मक सुझाव आउन थालेको छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यस्त सडकमा गुड्ने बस तथा माइक्रो बसहरुमा गुन्द्रुक खाँदेजस्तै यात्रु कोचिनु अनौठो कुरा होइन । असुरक्षाका कतिपय परिणाम चोरी तथा ठगीका रूपमा बाहिर आएर पनि केही विषय भने गुम्सिएर बसिरहेका छन् ।
महिलाहरूले सार्वजनिक यातायातमा देख्दा र सुन्दा सामान्यजस्ता लाग्ने तर निकै गम्भीर प्रकृतिका हिंसाका घटनाहरू भोग्नु परिरहेको छ ।
काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातको यात्राका घटनाक्रमहरू त्यति सहज हुँदैनन् । महिला, अपाङ्ग ताथ अशक्तहरूका लागि मात्र भनेर लेखिएका सीटमा सोही व्यक्ति नवसेर अरुनै व्यक्ति वस्दा सम्बन्धित यात्रुलाई बसाउने आँट गर्न कसैले सकदैन । सार्वजनिक यातायातमा महिलाका लागि भनेर छुट्याइएको कोटा हात्तीको देखाउने दाह्रा मात्र बनेका छ र महिलाहरूको पीडा बढिरहेकै प्रहरीकै एक तथ्याङकले देखाउदछ ।
दुःख झेलेरै भए पनि कोचिएर सार्वजनिक सवारी साधन चढनु उनीहरूको नियति हो। यस्ता यात्राहरूमा न त उनीहरूको जिउ नै सुरक्षित हुन्छ न त समान नै । यौनका भोक पुरुषहरूले बसभित्रको पेलानमा युवतीहरूलाई अनावश्यक रूपमा घचेट्ने, छुने खोज्ने, संवेदनशील अंगमा छुने चेष्टा गर्छन। यसले महिलाहरू नजानिँदो गरी हिंसाको सिकार बन्छन् तर बोल्दैनन्।
महानगरी प्रहरी परिसर काठमाण्डौंका प्रहरी प्रमुख उत्तम सुवेदीका अनुसार यात्राका क्रममा सोझा महिलासँग गलत मनसायले कुनै पुरुषहरुले सहयोग गर्ने क्रममा वा गन्तव्यमा र्पुयाइदिने बहानामा लुटपाट वा विभिन्न शारीरिक हिंसा हुने घटनाले पनि महिलाहरू प्राकृतिक वा शारीरिक स्थानमै कति जोखिममा छन् भन्ने विगतका अपराधीक घटना वाट सावित भईसकेको वताउछन् । प्रहरी प्रमुख सुवेदी भन्छन् ,कतिपय चालक ग्रामीण, अशिक्षित युवतीहरूलाई फकाएर पन्जामा पार्न निकै खप्पिस हुन्छन्। सहरकै कुरा गर्ने हो भने पनि युवतीहरू बाटोमा हिँडिरहेका छन् भने कतिपय चालकहरू नजिकै पुगेर अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउनुका साथै जिस्काउँछन् पनि। कतिपय पुरुष चालक महिला ट्राफिकलाई समेत जिस्क्याउन पछि पर्दैर्नन्। यस्ता प्रकारका क्रियाकलाप उतिसारो गम्भीर नदेखिए पनि सारमा भने निकै गम्भीर एवं साधारणजस्ता देखिने यी विषयले हाम्रो समाजको विकृति हो यो अनत्य गर्न सवैले प्रहरीलाई साथ र सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ ।
कानुनले महिलामाथि हातपात गर्ने, गालीगलौज गर्ने वा त्यस्तै कुनै शारीरिक प्रताडना कार्यलाई मात्र होइन महिलालाई दिइने कुनै किसिमको मानसिक एवं सामाजिक पीडाहरूलाई महिलामाथिको हिंसाका रूपमा लिएको छ। महिलामाथि गलत मनसायले हेर्नु वा यौनभाव झल्कने गरी अनावश्यक बोल्ने काम पनि हिंसाअन्तर्गत पर्छ। यस्ता क्रियाकलापलाई कानुनले दण्डनीय अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ तर व्यवहारमा भने यस्ता क्रियाकलापलाई निकै सहज र सर्वव्यापी भएर फैलिरहनेका वा चलिरहेका देखिन्छन् । सार्वजनिक यातायातभित्र महिलाले खेप्नुपरिरहेको पीडा परिरहेको पीडा पनि यस्तै प्रकारको महिलाहिंसाका रूप हो जसतर्फ धेरैको ध्यान गएको देखिँदैन।
महिलामाथि हुने हिंसा निर्मूल पार्न सार्वजनिक यातायातलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ महानगरी प्रहरी प्रभाग बलम्वुका प्रहरी निरीक्षक शंकर खड्का वताउछन् । उनी भन्छन्,यस अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातमा हुने यौन हिंसा विरूद्ध आवाज उठाउने, पीडक विरूद्ध खुलेर बोल्ने, सह(चालक तथा यात्रीहरूलाई घटनाबारे जानकारी दिने, प्रहरीको हटलाइन १०० महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख ९८५१२०५५५५, नजिकैको प्रहरी कार्यालयहरुमा रिपोर्ट गर्ने जस्ता सूचनामूलक ब्यानर र स्टिकरहरू सार्वजनिक यातायातमा टाँसिरहेका छौ । जसको मुख्य उद्देश्य यात्रुहरूमा यौन हिंसाबारे सचेत गराउनु र यौन हिंसा विरूद्ध उभ्याउनु हो’’ । अहिले सम्म २० हजार यात्रुहरुलाई सचेतना प्रदान गरेको बताए ।
महानगरी प्रहरी बृत्त थानकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी कुमार विक्रम थापाले ‘महिलाहरू भीडभाड रहने र सार्वजनिक स्थलहरूमा जानुपर्ने अवस्था पहिलेभन्दा धेरै भएकाले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यौन हिंसाका घटना हुन सक्ने सम्भावना बढी भएकाले यस तर्फ ध्यान केन्द्रीत गरेका छौ । थापाका अनुसार साधारण लेखपढ मात्रै गर्न सक्ने हुनाले दुर्व्यवहारको एउटा प्रमुख कारण चेतनाको कमी रहेको वताए ।
“राजधानीको सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र हिंसारहित बनाउन यो अभियान सहयोगी भएको महसूस गरेका छौं”, महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी प्रहरी प्रमुख उत्तम सुवेदी भन्छन । प्रहरीले शार्वजनिक यातायातमा हुने महिला हिंसाको विरुधमा सेप्टी पिन अभियान पनि सञ्चालन गर्दे आएको छ । विस्तारै विस्तारै प्रहरी र नागरिकको सहकार्यमा यो सवै स्थानिय जनताहरु लाई सुरक्षित र सहज वनाउने अभियाननै हो । यस्तो अभियानमा सवैले आआफ्नो तवरवाट साथ र सहयोग गर्ने हो भने पक्कै पनि शान्त सव्य र भय रहित यात्रा वनाउन सहज मिल्ने देखिन्छ ।
Previous articleबौद्धको अत्तरखेलमा गोली चल्यो, एक नियन्त्रणमा
Next articleशतप्रतिशत जनताको पहुँचमा खानेपानी पुर्‍याउनका लागि सहयोग गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह